ညီနေမင်း: Noise Ninja Ver. 2.3
Noise Ninja Ver. 2.3
ZawHtunLinn : Download serial & crack file for Noise Ninja Ver. 2.1.1 လေးလိုချင်လို့ပါ .
ဒါလေးကတော့ plug in လေးပါ ဘာအတွက် plug in လဲဆိုရင်တော့ photoshop အတွက် plug in ပါ တောင်းထားတာက version 2.1 တောင်းထားပေမယ့် . ကျွန်တော် version ကို 2.3 တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . သူက ဘယ်နေရာတွေမှာ သုံးတာလဲဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ဓါတ်ပုံတွေ ၀ါးနေတာမျိုးတွေ အသားရောင်ကနေ အရောင်လေးတွေ ဖျာထွက်နေတာမျိုးတွေနဲ့ . အသားချောမွှတ်လာအောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် ဓါတ်ပုံရဲ့ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုအတွက် ချိန်ညှိပေးနိုင် တဲ့အပြင် တစ်ကယ့်ကို ကောင်းမွန်တဲ့ effect များကို ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ tool ဖြစ်ပါတယ် . သူရဲ့ အဓိက အားသာချက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ photoshop သမားများ အသိဆုံးပါ . အသားအရောင်ကို ချောမွှတ်ချင်ရင် နဲနဲ blur ခပ်ပါးပါး လိုက်ရတယ် ဆိုတာကိုပေါ့ . ဒီကောင်ကတော့ လိုက်စရာမလိုပါဘူး . မူရင်းအသားရောင်ကို ပိုပြီးတောက်ပလာအောင် ချောမွှတ်လာအောင် လုပ်ပေးတာပါ . သူ့ကို adobe photoshop ၀ယ်တိုင်း မပါလာပါဘူး . သီးသန့်ထပ်ဝယ်ရ ထပ်တင်ရ တာပါ .
(၁) သူ့ရဲ့ main root ထဲက plug in folder ထဲမှာ install လုပ်ရမှာပါ . သဘောပေါက်မယ် လို့မျှော်လင့်ပါတယ် . မပေါက်တော့လဲ နောက်နေ့ ကျွန်တော် Install လုပ်ပုံလုပ်နည်းကို တင်ပေးပါ့မယ် . သူက Plug in ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ခါတည်း Install လုပ်လို့မရပါဘူး .
(၂) c:/ Program / adobe / photoshopcs2(or)cs3(or)cs4 / plugin အဲ့လိုမျိုး browser ကနေ plugin folder ကို ရွေးပေးလိုက် ပြီးမှ install လုပ်လိုက်ပါ .
(၃) အသုံးပြုပုံကတော့ နောက်မှပဲ ပြောပြပါ့မယ် . လွယ်ပါတယ် . ကိုပြင်ချင်တဲ့ ပုံကို selection ပေးလိုက် ပြီးတော့ photoshop >> Filter >> Picturecode >> Noise Ninja ကို နှိပ်ရမှာပါ . ပြီးရင်တော့ အဲ့ထဲမှာပါတဲ့ effect တွေကို လိုက်ပြီးတော့ သုံးလိုက်ပါ . လွယ်ပါတယ် ရုပ်ရှင်မင်းသား မင်းသမီးတွေရဲ့ ပုံတွေကို မြင်ဖူးလားမသိဘူး . ကျွန်တော်တို့နဲ့ အသားအရည်ချင်း တူညီပေမယ့် ဘာ့ကြောင့် အသားအရောင်တွေ ၀င်းပြီးတော့ ကြည့်လို့ကောင်းနေတာတွေ၊ မှုန်မှုန်လေးတွေ ဖြစ်နေတာတွေက noise ninja ရဲ့ လက်ချက်လဲပါတယ် . တစ်ကယ်တော့ မင်းသား မင်းသမီးလဲ ကျွန်တော်တို့လို အသားအရည်ပါပဲ . တစ်ခါတစ်လေဆိုရင် ကိုယ့်ထက်တောင် အသားမဲသေးတယ် . ဒါပေမယ့် ပြင်လိုက်တော့လဲ ဟာမိုက်တယ် ဖြစ်သွားရော . ကဲ မိုက်ချင်ရင် ဒေါင်းလိုက်ပါ . :)
ဘယ်လို install လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို မရှင်းသူများ ၊ နားမလည်သူများအတွက် ကျွန်တော် ရှင်းပြထားတဲ့ movie ကိုပါ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် .
Download movie >> ifile.it ၊ Multiupload
Download noise ninja software >>> Download ifile.it ၊ Download mediafire ၊ Download multiupload
Posted by ညီနေမင်း at 10:41 AM
Labels: photoshop plugin
Application တွေကို Portable ဖြစ်အောင် ဘယ်လို ဖန်တီ...
မျက်နှာအနေအထားကို professional ကျကျပြုပြင်ပြောင်းလ...
jail break လုပ်နည်း (မြန်မာလို)
FL STUDIO6(မြန်မာလို)
2006 ခုနှစ်ထုတ် ကွန်ပျူတာဂျာနယ်များ စုစည်းမှု
2005 ခုနှစ်ထုတ် ကွန်ပျူတာဂျာနယ်များ စုစည်းမှု
2002 ခုနှစ်ထုတ် ကွန်ပျူတာဂျာနယ်များ စုစည်းမှု
2004 ခုနှစ်ထုတ် ကွန်ပျူတာဂျာနယ် စုစည်းမှု
zawgyi နှင့် pagemaker ပြဿနာ
2007 ကွန်ပျူတာ ဂျာနယ် ပေါင်းစည်းမှု
Pointdev Ideal Administration 2009 9.5
TMPGEnc XPress 4.7
Your Uninstaller Pro 6.3
Xilisoft AVI To DVD Converter 3.0.34 + Serial
Nokia theme များ စုပေါင်းစပ်ပေါင်း
Nokia phone themes
Kaspersky(KIS & KAV) 2009 နှင့် 2010 ကို offline u...
CD ကူးထားပြီးသား အခွေတစ်ခွေကို ထပ်ပြီးတော့ data တေ...
Mediaplate (for Joomla 1.5)
BurnAware Pro 2.4
SYSTRAN6PREMIUM TRANSLATOR
BluffTitler DX9 7.52 with keygen
ကွန်ပျူတာကို keyboard မသုံး mouse မသုံးပဲ micropho...
window7ultimate (ifile.it)
kaspersky key အတွက်
iso ဖိုင်လုပ်ချင်သူများ အတွက် UltraISO Premium Edi...
Kerio WinRoute Firewall 6.7.0 (win 32 x win 64)
virtual drive အတွက် Daemon Tools Pro Advanced 4.35...
key ဒုက္ခကင်းဝေးဖို့ Norton Internet Security 2010 ...
Download limit သတ်မှတ်ဖို့ Bandwidth Controller သု...
Window7ultimate (32x64)
kaspersky 2010 ကို ဘယ်လို update လုပ်မလဲ ( Movie ရ...
error အတွက် winrar 3.9 and serials
Mediafire ကနေ Download လုပ်မလဲ (movie ရှင်းပြချက်...
ifile.it ကနေ upload တင်နည်း (movie ရှင်းပြချက်)
rapidshare ကနေ download လုပ်နည်း (movie ရှင်းပြချက...
window7DVD တစ်ချပ်ရလာဖို့ ဖိုင်ဖြေနည်း .
Tuneup Utilities 2010 and Serial
window7အတွက် Driver မလိုပါ